Nnukwu data na ahia: Nnukwu Nsogbu ma ọ bụ Nnukwu Ohere? | Martech Zone
Nnukwu data na ahia: Nnukwu Nsogbu ma ọ bụ Nnukwu Ohere?
Tọzdee, Eprel 25, 2013 Saturday, January 14, 2017 Dale Renner
Azụmaahịa ọ bụla metụtara ndị ahịa ozugbo chọrọ ijide n'aka na ha nwere ike ịdọta ma jigide onye ahịa ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa dị ka o kwere mee. Today'swa nke oge a na-enye ọtụtụ ntụpọ - ọwa ọdịnala nke ozi na email nkịtị, ma ugbu a ọtụtụ ndị ọzọ site na ntanetị na saịtị mgbasa ozi ọhụụ ọhụụ yiri ka ha na-apụta kwa ụbọchị.
Nnukwu data na-enye ma ihe ịma aka na ohere maka ndị ahịa na-anwa ijikọ ma soro ndị ahịa na-emekọrịta ihe. A ga-ejikwa oke olu na ọtụtụ data dị na disparate ahaziri ahazi, nke ahaziri ahazi na nke anaghị ahaziri ahazi banyere ndị ahịa na omume ịzụta ha, mmasị, mmasị na ihe ndị na-adịghị amasị ha iji gaa n'ihu mkparịta ụka ahụ.
Iji nwee ihe ịga nke ọma, mkparịta ụka gị ga-abụrịrị oge kwesịrị ekwesị ma dịkwa ndị ahịa gị mkpa. Mana ị nwere ike ịdị mkpa ma ọ bụrụ na ịmara onye onye ahụ bụ, nke chọrọ ikike ịme mkpebi njirimara n'etiti ozi niile nwere ike ịnweta. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike nweta nghọta ịchọrọ iji hazie ozi gị ma mee ihe n'oge.
Nsogbu bụ na ọtụtụ ngwa ngwa ahịa na usoro nchịkwa mgbasa ozi adịghị njikere ịnakọta ma kpochaa ugwu a iji chọpụta ihe dị mkpa, ma jiri ozi ahụ mepụta ma jigide mkparịta ụka na onye ahịa. Ọzọkwa, ụfọdụ nyiwe anaghị enye otu njikwa njikwa jikwaa mkparịta ụka n'otu oge n'ofe ọwa.
The RedPoint Convergent Marketing Platform ™ E wuru ya site na ala iji mee ka ndị na-ere ahịa dozie nnukwu data data a ma zụlite mkparịta ụka oge niile, ezigbo oge.
RedPoint Convergent Marketing Platform na-enye nlele ndị ahịa nke 360 ​​ogo site na ngwa ngwa ijide, dị ọcha, dozie njirimara na ijikọta data ndị ahịa site na isi mmalite niile, gụnyere anụ ahụ, ecommerce, mobile, na ngalaba data data dịka Facebook na Twitter. Ejiri ihe osise zuru oke nke onye ọ bụla na-azụ ahịa, njikwa mgbasa ozi RedPoint na ngwa ogbugbu na-enye ndị ahịa ohere ime ihe dị irè karị, mkpọsa ahịa mgbasa ozi na ọnụ ahịa dị ala karị, wee ruo 75% ọsọ ọsọ karịa ụzọ ndị dị ugbu a.
Nchịkọta mgbasa ozi RedPoint na ngwá ọrụ na-egbu ndị ahịa na-enye ndị ahịa ohere ime ihe dị irè karị, mgbasa ozi mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ dị ala karị, ma ruo 75% ngwa ngwa karịa ụzọ ndị dị ugbu a:
Teknụzụ RedPoint Global nwere ike ịnabata data data taa ma wuo ya maka ọdịnihu nke data buru ibu, nke ga-agụnye ọtụtụ iyi data sitere na ngwaọrụ mkpanaka, ngwaọrụ ejikọrọ na mgbasawanye nke ịkparịta ụka n'socialntanet. Ihe owuwu a na-eme ka a na-eme ka a na-eme ka a na-akpọ 'Convergent Marketing Platform' enwere ike ijikọ ya na sistemụ ọ bụla, ebe ọ bụla na usoro data ọ bụla n'ụdị ọ bụla.
RedPoint Convergent Marketing Platform na-enye nlele ndị ahịa nke ogo 360 site na ijide ngwa ngwa, na-ehicha, na-edozi njirimara na ijikọ data ndị ahịa site na isi mmalite niile, gụnyere anụ ahụ, ecommerce, mobile, na ngalaba data data dịka Facebook na Twitter:
Marketingre ahịa na irere ndị ahịa taa na -emepụta data dị ukwuu ahaziri ahazi, nke ahaziri ahazi na nke a na-adịghị edozi, yana enwere obi abụọ na omume a ga-emezi. RedPoint Global na-akwado nnukwu nsogbu data ahịa a n'isi, na-enyere ndị ahịa aka ka ha nwee ike ibute data ndị ahịa nke ọma iji zụlite mkpọsa nke ruru ndị ziri ezi na oge kwesịrị ekwesị.
Tags: nnukwu datawdgOgbeRedPointPlatform Marketing Mgbasa Ozi nke RedPointRedPoint Global
Dale Renner nwere ihe karịrị afọ 20 na ahụmịhe n'ọhịa sọftụwia nyocha. Dị ka Chief Executive Officer nke Ụlọ ọrụ RedPoint Global Inc., Dale emeela usoro nduzi nke ụlọ ọrụ ahụ kemgbe mmalite ya na 2006. Tupu ịmalite RedPoint, Dale bụ onye na-ahụ maka njikwa ụwa na Accenture ebe ọ tọrọ ntọala ụlọ ọrụ CRM ahụ. N’okpuru ọchịchị ya, Dale toro azụmaahịa ahụ rue ijeri $ 1.5 na ego ha nwetara. Ọrụ ndị gara aga gụnyekwara CEO nke Seisint, Inc., ụlọ ọrụ nchịkwa ihe ize ndụ na ụlọ ọrụ teknụzụ na onye isi nke ClarityBlue Inc., onye na-eweta nghazi ọgụgụ isi ndị ahịa akwadoro maka ụlọ ọrụ azụmahịa.
Ihe nke Facebook zuru oke